Sida loo hagaajiyo Amazon SEO aad?
Sida laga soo xigtay xogta tirakoobka, in ka badan 55% dadka isticmaala kuwa jecel inay iibsadaan internetka, waxay u leexdaan amaanka ganacsiga Amazon si ay u helaan waxa ay u baahan yihiin. Waa barta tixraaca ee dukaamada waqtigayaga. Isticmaalayaashu waxay hubiyaan mawduucaan marka ugu horeysa sababo cad sida muuqata sida sumcad wanaagsan ee boggan, awood u leh inay isbarbardhigaan qiimaha oo ay helaan qiimaha ugu fiican ee webka, awood u lahaanshaha akhrinta jawaab celinta macaamiisha, iyo wixii la mid ah. Intaa waxaa dheer, isticmaalayaasha waxay og yihiin in xaalad khibrad xun oo leh mexigan, waxay heli doonaan magdhow buuxa. Dhamaan sifooyinkaasi waxay sameeyaan Amazon faa'iido u leh iibsadaha iyo iibiyeyaasha. Taasi waa sababta haddii aad jeclaan lahayd inaad bartilmaameedka ugu weyn ee macaamiisha suurta gal ah, Amazon waa goobta ugu fiican ee ujeedooyinkaas. Si aad uga hesho liistadaada boggaaga ganacsiga, waxaad u baahan doontaa inaad hirgeliso xeeladaha wax-ku-oolka raadinta si aad u muujiso alaabtaada iyo ganacsigaaga.
Qodobkan waxaa loogu talagalay inuu kaa caawiyo sidii aad u horumarin lahayd Amazon SEO iyo inaad ka dhigto alaabooyinkaaga muuqaalkan ugu weyn ee tafaariiqda internetka.
Mabda'a alaabooyinka ku qoran Amazon
Waxaa jira dhowr arrimood oo muhiim ah oo aad u baahan tahay inaad sameyso ficil si aad u hagaajiso boggaaga Amazon SEO. Haddii aad jeclaan lahayd inaad sameysid liis gareysi wax soo saarka si fiican, waxaad u baahan tahay inaad ogaato qaabka aad u baahan tahay inaad diirada saarto.
Sida laga soo xigtay algorithms ranking Amazon, macaamil macquul ah arko xogta soo socda ka dib weydiinta search:
la beegsado ereyada muhiimka ah iyo summadaha;
helitaanka badeecada (hadda la heli karo ama kaydka);
dib u eegista macaamiisha.
Dhamaan dhinacyadaas waxaa loo kala qaybin karaa qodobada waxqabadka iyo qodobbada ku habboon. Kooxda koowaad ee kumbuyuutarka ayaa muujinaya calaamadaha Amazon ay u isticmaalaan si ay u kala saaraan alaabta iyada oo ku saleysan inta lacag ah ee ay sameyn doonaan sidaas. Waxyaalaha la isku waafaqsan yahay waa alaabta muhiim u ah ka dib raadinta user.
Aan ugu horeyn ka wada hadalnay arrimaha ku saleysan jaantuska. First of dhan, waa sicir bedelaad. Wadahadalada ayaa ah kuwo muujinaya saameynta Amazon. Waxaad isticmaali kartaa xeelado dhowr ah oo wax ku ool ah si aad u muujiso Amazon waxtarkaaga ayaa si fiican u beddelaya. Marka ay timaado si aad u hesho muuqaal sawir ah, Amazon waa qalad aad u adag. Waxaad arki kartaa jaangoynyo kala duwan sida cutubyada iyo kulamada, laakiin ma aha macluumaad ku filan si loo xakameeyo xaalada.
Waxaad ka heli kartaa xogtaada wada sheekeysiga adiga oo tagaya Warbixinnada, ka dibna Warbixinta Ganacsiga, Xaqiiqda Suuqa ee Faahfaahsan iyo Ugu dambeyntii Gaadiidka. Halkan waxaad u baahan tahay inaad eegto boqokiiba qaybta cutubka ama kalmadaha kale ee tirada xisadaha.
Si loo wanaajiyo darajooyinkaaga Amazon, waxaad u baahan doontaa inaad bedbaadiso tirada boqollayda iibsashada. Tusaale ahaan, unugyadaada ayaa amar ku bixiyay sanduuq iibsashada ah inay calaamad u tahay Amazon in aad badalayso.
Waxaad saameyn kartaa rikoodhada ku saleysan qaab-dhismeedka adiga oo soo saaraya sawirradaada iyo hagaajinta qiimaha badeecada. Hada, bal aynu eegno waxyaabaha saameynaya Amazon ee ku salaysan tiirarka. Waxyaalaha la isku waafajiyo dhammaantood waxay ku saabsan yihiin xiriirka su'aalaha raadinta iyo macluumaadka lagu soo bandhigay bogga.
Si aad boggaaga uga dhigto mid aad u khuseysa su'aasha isticmaalaha, waxaad u baahan tahay in aad wax ka beddesho alaabtaada liiska. Waxaad u baahan tahay inaad ku darto ereyada muhiimka ah ee muhiimka ah oo la xariira magacaaga iyo sharaxaadda si aad uga caawiso macaamiishaada mustaqbalka inay ka helaan badeecadaada bog.
Noocyada lagama maarmaanka ah ee aad u baahan tahay inaad ku jirto mawduucaaga waa nooca badeecada, sharaxaad gaaban (midabka, cabbirka, maaddada, tirada), khadka badeecadda iyo ciddii ceymahaan loogu talagalay (carruurta, dadka waaweyn, iwm Source . )